သတင်း | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဧပြီလ 25, 2017 admin ရဲ့ 0
ကျနော်တို့ပြတင်းပေါက်မောင်းသူ updated ပြီ 10 Atheros Qualcomm ကြိုးမဲ့စက်ကိရိယာများအတွက်. ပံ့ပိုးမှု device ကို >>> AT1xxx / AR2xxx / AR5xxx / AR9xxx series More […]
ကျနော်တို့ပြတင်းပေါက်မောင်းသူ updated ပြီ 10 Intel ကဝိုင်ယာလက်စက်ကိုများအတွက်. ပံ့ပိုးမှု device ကို >>> 3945 / 4965 / 5100 / 5300 / 6200 / […]
OS-STORE Donate ~ OS-STORE isaforeign trade enterprise electronic commerce of China office, in Hong Kong, Taiwan, ဥရောပ, all haveabranch. All well-known e-commerce […]
သင်ဟာ WIFI မျှော်လိုပဲရာကဘာလဲမြင်ပြီလော
ဇွန်လ 25, 2014 admin ရဲ့ 0
သင်ဟာ WIFI မျှော်လိုပဲရာကဘာလဲမြင်ပြီလောမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်း, တက်ဘလက်စသည်တို့ကို, wifi မမြင်ရတဲ့အဖြစ်လိုအပ်သောအမှုအရာဖြစ်ဖို့လည်းဖြစ်ပုံရသည်. Have you seen […]
မေ 11, 2014 osstevejobs 0
မေ 10, 2014 osstevejobs 0
MADRID, မေ 8 (Xinhua) — Real Madrid‘s 1-1 draw away to Valladolid on Wednesday night looks as if it could have cost them more than […]
နည်းပညာ စီပီယူ မိုဘိုင်းဖုန်း စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု processor ​​ကို Nokia က HTC က ပရိုဆက်ဆာ Intel က 64-နည်းနည်းက Windows Technology_Internet OS ကို-STORE Software များ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ HD Graphics ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Samsung က device ကိုမော်ဒယ် ဥပဒေရေးရာအနက်
OS ကို-STORE Qualcomm မှ Technology_Internet စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စီပီယူ မိုဘိုင်းဖုန်း device ကိုမော်ဒယ် Samsung က Intel က HD Graphics စမတ်ဖုန်းများ Software များ Samsung ရဲ့ Galaxy Nokia က 64-နည်းနည်းက Windows processor ​​ကို Intel က Server ကို ဥပဒေရေးရာအနက် Sony Ericsson က HTC က ပရိုဆက်ဆာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် နည်းပညာ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု